Google Chrome bidoro inye nkwado maka Ogwe Aka | Esi m mac
Site n’oge ruo n’oge ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere àgwà nke ịnabata ohere ọhụrụ nke ngwaọrụ ndị na-eweta n’ahịa ahụ. Apple anaghị eji otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-emelite ngwa ngwa ya ngwa ngwa maka atụmatụ ọhụrụ ngwaọrụ gị mejuputara, ọ bụ ezie na ọ na-atọ ọchị. Google bụ ihe atụ ọzọ nke ụlọ ọrụ buru ibu nke yiri ka ọ na-esiri ike iji ezigbo anya hụ ọganiihu teknụzụ nke asọmpi ahụ.
Couplebọchị ole na ole gara aga Google emelitere ngwa ahụ Gmail maka iOS na-eme ka ọ dakọtara na teknụzụ 3D Touch, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ na ọkara mgbe emechara ya. Mana ọ dị ka nke ahụ agbanweela dabere na ngagharị ọhụụ nke ụlọ ọrụ ahụ, mmegharị metụtara oge a na macOS na MacBook Pro ọhụrụ yana Touch Bar.
Google ka weputara beta ohuru nke Chrome nke ozo maka MacOS, tinye nkwado maka Touch Bar nke ụdị MacBook Pro ọhụrụ a, beta a, nke na-ebu nọmba mbipute 58.0.3020.0, malitere ụbọchị ole na ole gara aga ma dị otu n'ime akwụkwọ akụkọ ga-abia na nwelite Chrome na-esote, onye Releasebọchị mwepụta a na-atụ anya ya bụ Eprel 25, dị ka weebụsaịtị Chromium.
Ugbu a mmejuputa iwu nke nkwado a maka Ogwe Aka bu ihe di egwu na ọ bụghị dị ka nnukwu na ọtọ ka anyị pụrụ ịnụ ụtọ na Safari. Beta a na-enye anyị ohere nke inwe ike ịlaghachi na ihu akwụkwọ gara aga, na nke na-esote, bọtịnụ iji bubatagharịa peeji ahụ ma ọ bụ kwusi nnabata ya, bọtịnụ toro ogologo nke ga-eme ka cursor ahụ gaa ebe ọ bụla iji mee nyocha, bọtịnụ emeghe a ọhụrụ otu taabụ na n'ikpeazụ ọzọ ka ibe edokọbara weebụsaịtị ebe anyị nọ.
Google abụghị ụlọ ọrụ mbụ nyere nkwado maka Touch Bar nke ọhụrụ MacBook Pros, ma ọ bụ nke ikpeazụ. Na mbụ Opera, 1Password, Revel 7, Spotify na Office n'etiti ndị ọzọ etinyelarị nkwado maka ihuenyo mmetụ OLED a na-anọchi igodo ọrụ nke MacBook Pro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Google Chrome bidoro inye nkwado maka Touch Bar